Lammiileen UAE 4 lammii Itoophiyaa bifa suukkanneessaa ta’een ajjeesan mana hidhaatii gadi lakkifaman - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Lammiileen UAE 4 lammii Itoophiyaa bifa suukkanneessaa ta’een ajjeesan mana hidhaatii gadi...
Lammiileen UAE 4 lammii Itoophiyaa bifa suukkanneessaa ta’een ajjeesan mana hidhaatii gadi lakkifaman
Lammiileen UAE 4 bara 2009 lammii Itoophiyaa takka bifa suukkanneessaan ajjeesan manni murtii erga maatiin lammii Itoophiyaa ajeefamtee gumaa nyaachuuf murteessee booda gadi lakkifamaniiru. Jalqaba irratti manni murtii biyyattii namoonni kunniin du’aan akka adabamaniidha kan murtee irra gayee ture. Amma garuu wolii galtee maatii intala ajjeefamteefi kanniin ajjeesanii jiddutti godhameen worri ajjeese maallaqa gumaa UAE Dh200,000 [naannoo Doolaara Ameerikaa 55,000] erga kafaluuf tole jedhaniiti kan murteen du’aa yakkamtoota kanniin irraa ka’e.
Yakkamtoonni 4 umriin 30 hanga 35 jidduu jiran kunniin woggaa 5 erga hidhamanii booda kan mana hidhaatii bilisa akka gadi lakkifamaniif manni murtii kan murtee haarawa dabarse.
Namoonni kunniin lammii Itoophiyaa humnaan ukkaamsanii bakka isiin itti hojjattuu erga konkolaataan fudhatanii booda yakka gudeeddii irratti raawwatani. San booda qaama isii billawaan bakka heddutti cicciranii lubbuu isii galaafatani. Sunis akka waan hingeennee konkolaattaa ‘Land Cruiser’ qaama isii irra oofanii reeffa isii cirracha keessatti awwaluuf yaalii godhan. Yakkii kuni waan akkaan suukkaneessaa ta’e ta’uu isaati kan yeroo sanitti himamaa ture.
hojjattuu itoophiyaa ajjeefamte
Mana murtee UAE
Previous articleZeeytiin zeeytuunaa dhibee kaansariitiif dawaa ta’uun nimala jedhame
Next articleItoophiyaan haleellaa saayberii geezexeessitoota miidiyaa wolabaarratti geggeessiti, jedha Citizen Lab